Mepụta map ntuli aka na Fusiontables - na nkeji 10 - Geofumadas
Mepụta map ntuli aka na Fusiontables - na nkeji 10
Disemba, 2013 Google Earth / Maps
Ka e were ya na anyị chọrọ ịtụgharị uche na eserese ngosi, nsonaazụ ntuli aka nke ndị ọchịchị, ka ndị otu ndọrọndọrọ nwee ike nụchaa ha ma soro ndị mmadụ kee anyị. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ụzọ dị ala iji mee ya, Achọrọ m igosipụta ihe atụ iji kọwaa otu onye ọrụ nkịtị ga-esi mee ya na FusionTables.
Ihe anyị nwere:
Ihe a rụpụtara site na Ụlọikpe Ntuli Aka Nchịkwa, ebe ị nwere ike ịhụ ndepụta site na obodo.
Nkeji 1. Mee tebụl
Emere nke a site na iyingomi na ịgafe site na tebụl nke aka site na Supreme Electoral Tribunal to Excel. A na-eji nnomi pụrụ iche eme ihe, naanị ederede na ka enweghị ngosipụta mba, ọ dị mkpa nyocha maka ngalaba 18 ọ bụla. Ihe dị na Chrome bụ na emere nhọrọ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị gbanwee nzacha ahụ ka anyị wee mee Ctrl + C.
Anyị na-ahapụ isiokwu naanị na nke mbụ.
Dịka tebụl enweghị nhazi, ọ ga-adị mkpa iji geocode tinye ya. Iji mee nke a, anyị ga-eme ka ogidi ndị ahụ dị na Google ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya mgbe ị na-achọ ebe ndị ahụ; anyị chọrọ ka ịchọ obodo, ngalaba, mba.
Na kọlụm F, anyị ga-eji usoro concatenate dị ka nke a: = CONCATENATE (Kọmitii nke obodo, »,«Kọmitii Ngalaba, »,«,»Mba«), Anyị na - emekọkwa commas n’etiti akara akara iji hụ na eriri dị ka atụmanya. Ya mere kọlụm n'ahịrị 2 ga-adị ka nke a:
= CONCATENATE (B2, »,», A2, »,», »honduras») ma n'ihi nke ahịrị ga - abụ: Central District, Francisco Morazán, honduras
N'okpuru nke a na kọlụm E anyị ga-akpọ ya "Concatenate"
Nkeji 5. Otu esi bulite ya na FusionTables
A na-etinye FusionTables na nchọgharị Google Chrome, na mgbe ọ na-akpọ ya ka ịmepụta akwụkwọ ọhụrụ site na njikọ a, panel a ga-apụta.
Ị nwere ike ịhọrọ mpempe akwụkwọ dị na akwụkwọ mpịakọta Google, mepụta oghere ma ọ bụ bulite ihe anyị nwere na kọmputa.
Ozugbo ahọpụtara anyị họrọ bọtịnụ «Osote». Ọ ga - ajụ anyị ma aha ogidi ndị ahụ dị n’ahịrị nke mbụ, mgbe ahụ anyị na - eme «Osote» wee ga - ajụ anyị aha anyị ga - enye tebụl ahụ yana nkọwa ụfọdụ enwere ike ịdezi ya ọzọ.
Nkeji 7. Esi georeferenke tebụl
Site na Njikwa taabụ, họrọ nhọrọ "Geocode ..." ma jụọ anyị kọlụm nke geocode nwere. Anyị na-egosi kọlụm nke anyị kọwara na mbụ.
Ọ bụrụ na anyị ekeghị kọlụm edere ọnụ, anyị nwere ike ịkọwa obodo, mana n'ihi na aha dị ọtụtụ n'ọtụtụ mba, anyị ga-enwerịrị ebe gbasasịa na mpụga Honduras. Ọzọkwa n'ime otu obodo enwere obodo ndị nwere otu aha ahụ, dịka ọmụmaatụ "San Marcos", ọ bụrụ na anyị emeghị ngalaba ahụ, anyị ga-enwe nsogbu ahụ.
Enwere nhọrọ a na - akpọ "nkwupụta ọnọdụ mgbasa ozi," nke dị na nke a abụghị ihe dị mkpa n'ihi na agbụrịrị dum nwere ihe ọmụma ahụ ruo na ọkwa obodo.
Usoro a na - amalite ịchọta ebe ọ bụla dabere na njirisi ndị anyị kọwara. N'okpuru ebe ọ na-egosi na oroma pasent nke data na-enweghị atụ, nke ga-eme n'ozuzu ya na ọnọdụ ndị Google amatabeghị na nchekwa data ya; Na nke m nke 298, ọ bụ nanị 6 ka o doro anya; ọ na-abụkarị Google na-etinye ha na mba ọzọ n'ihi na ha dị ebe ọ bụla.
Nkeji 10, enwere ya
Ọ bụrụ na otu isi adịghị ebe, a na-edezi ya na nhọrọ "ahịrị", site na ịpị abụọ na mpaghara ahụ na njikọ njikọ "dezie geocode" imeziwanye ọchụchọ ahụ na igosipụta ebe na-edozi ambiguigu. Ọ bụrụ na ọ dịghị, mgbe ahụ ebe dị nso nwere ike igosi na anyị na-ahụ na mkpado Google.
Na nchịkọta nhọrọ, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye ogwe ka ịgbanwuo, gbanyụọ na post site na otu, site na ngalaba, site na obodo ... wdg.
Ebe i nwere ike ịhụ ihe atụ. O nweghi data ikpeazu n'ihi na emere m ya na ozi a ka na-edozi ya, na-ejikwa tebụl ụfọdụ jikọta ya na mpaghara na koodu obodo site na tebụl ọzọ ... mana dịka ọmụmaatụ enwere njikọ ahụ. Emeghị m mgbazi nke ime maka njehie elementrị ma nwee olile anya na nkeji 10 ezuola.
Ihe ndị ọzọ:
Nwere ike jikota tebụl, dezie ozugbo, bipụta ya na ụfọdụ isi ihe ndị ọzọ. Iji mee ihe ndị ọzọ, enwere API.
N'ezie, a na-eme nke a site na isi ihe.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ụdị maka ogidi ndị ahụ, anyị nwere ike iji ọrụ Shapescape (enweghi ike ịdakwasị) ... ọ bụ ezie na ọ chọrọ karịa 10 nkeji.
Previous Post«Previous GIS Pro Ihe kacha mma GIS maka iPad?
Next Post CartoDB, ndị kasị mma ike map onlineNext »